M/Siilaanyo Oo Guul Ku Tilmaamay Safarkii Imaaraadka Iyo Mashaariicda Horumarineed Ee Uga Soo Suurtagalay | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha M/Siilaanyo Oo Guul Ku Tilmaamay Safarkii Imaaraadka Iyo Mashaariicda Horumarineed Ee Uga Soo Suurtagalay
M/Siilaanyo Oo Guul Ku Tilmaamay Safarkii Imaaraadka Iyo Mashaariicda Horumarineed Ee Uga Soo Suurtagalay
“Waxaa Dhawaan Dalka Iman Doona Wufuud Mashaariicdaa Horumarined Hirgelin Doonta, waxaanan ku faraxsanahay sida qiimaha badan ee safarkaasi guusha qarankan ugu soo hooyay”….. Madaxweyne Axmed
Hargeysa (Foore)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo weftigii uu hogaaminayay ayaa dalka ku soo laabtay kadib safar 8 maalmood qaatay oo ay ku joogeen dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha iyo weftigii la socday markii ay soo cago dhigteen garoonta diyaaradaha ee Egal International Airport waxa si weyn ugu soo dhaweeyey Madaxweyne ku xigeenka Somaliland mudane Saylici, taliyeyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka Somaliland, Wasiiro, Xildhibaanada labada Golle, Sulaadiin, Cuqaal, shacbi badan oo kale. Ugu Horayn Madaxwaynaha Somalilad ayaa safarkiisa ka warbixiyay waxaana uu sheegay in Mashriic muhuum Ah ay la soo galeen Dalalka Carabta kaas oo Ay dhawaan Laga hir galin Doono Somaliland.
Dhinaca kale waxa uu Madaxwaynahu Sheegay in Mashariicdaasi ka mid Yihiin Biyaha, laydhka, Wadooyinka kuwaas oo la horumarin Doono iyo sidii loo Xoojin Laha Cilaqaadka ka dhaxeeya labada wadan. “Dalkan waxaanu ka maqnayn Mudo hada laga joogo sideed Cisho Waxaanan Tagnay dalka Imaraadka Carabta Dubia Halkaas oo Aanu kulan Kulanay masuuliyiintii Dalkaasi kaas oo Aanu kawada hadalnay danaha Labada Dal ka dhaxeeya sida wax wada qabsiga ee inaga dhaxeeyay waxaana jirtay in Mashariic inaga dhaaysay ay Balan qadeen kuwaasna waanu ka soo wada hadalnay”. intaas waxa uu ku daray madaxwayne siilaanyo isaga oo hadalkiisa siiwata. “Waxaanu rajaynaynaa dadkaas arimihii ku shuqul lahaa ee xilalkooda hayay ama ay yimadeen ama ay iman doonaan Hargaysa oo ay hawlahaas sidii loo fulin lahaa ama loo kicin lahaa ay ka shaqayn Doonaan,waxaanu kulan layeelanay Sheekh Mansuur oo ah Wasiirka Madaxtooyada waxaanan kawada hadalnay cilaaqaadka labada dal iyo arrimaha inaga dhaxeeya.
Mashariicda ay lasoo galeen madaxwaynaha Somaliland waxa uu ku sifeeyay mid Muhiim u Ah wadanka Somaliland oo Guul Ay ka soo gadheen Safarkaas ay ugu baxeen dalka Carabta.
“Mashuriicda Aanu ka soo wada hadalnay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo noqotona mid wayn oo dalkeena iyo dadkeena anfac,waxaanan leenahay dalka ayuu Anfac badan u yeelan Doonaan mashruucyadaas aynu soo galnay sifiicana waanu u aragnaa inaanu ugu soo guulaysanay safarkaas isaga ah.
wasiirka arrimaha dibada somaliland Maxamed Bixii yoonis ayaa isna kasii waramay ujeedka Safarka uu hogaaminayay madaxwayne siilaanyo waxa uu daran yahay waxaana uu yidhi.
“Safarkaas waxaanu u aragnaa inuu ahaa safar guul wayn Somaliland u soo dhaliyay sida madaxwaynahu sheegay waxaanu ka wada hadalnay arimo badan oo laxidhiidha xaga dhaqaalaha Horumarinta Nabad galiyada iyo Labada wadan ee walaalaha ahi siday uga wada shaqayn lahayeen Horumarka wadanka somaliland,mashriic badan oo markii hore laynoogu balan qaaday oo aynu dama Soconayna qayb ayaya ka ahayeen iyo Qaar cusub oo aanu hada kala soo hadalnay oo balaadhan. intaas waxa uu raaciyay.”waxaanu qabnaa in ay mashriicdaasi tahay mashariic dalka horumarinaysa oo ku lug leh biyaha,laydhka,iskuulo,jidad iyo cusbitaalo am qaxoontiga faraha badan ee soo cararay dalka yaman sidii wax loo tari lahaa,madaxdaas Abudabay ee aanu kulanka Layeelanay si Aad ah Ayay noo soo dhaweyeen,Balan waxa ay noogu qadeen in ay labada wadan wax wada qabsan Doonaan. Waxa uu cadeeyay wasiirku inuu aamisan yahay inuu shirkaasi guul ugu filnaa wadanka somaliland yahayna mid Wax Badan soo taray masuuliyiintii adeegyadaas fulin Lahaa ay dalka yimadeen qaarna ku soo fool leeyihiin.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Somaliland ayaa Su’aalihii lawaydiin lahaa madaxwaynaha Somaliland Hor istaagay iyada oo xaalada dalkuna meel Aadag marayso Hadday noqoto Xaga Muddo kordhintii iyo Dagaalka Qaawan ee Puntland ku soo bilawday deegaanka Sool.
Previous PostDuulimaadka Fly Dubai Ee Hargeysa Iyo Muhiimadda Xidhiidhka Ganacsi Iyo Bulsheed Ee Bariga Afrika Iyo Khaliijka Next PostGuddoomiye Ciro Oo Guurtida Ugu Baaqay In Ay Fuliyaan Heshiiskii Xukuumadda Iyo Xisbiyada Dalka